Allgedo.com » 2012 » October » 06
Home » Archive Daily October 6th, 2012
Guddoomiyaha Jubbaland Diaspora Forum (JDF) oo hambalyo u diray Ra’isal wasaaraha cusub ee Soomaaliya
Aniga oo ku hadlaya magaca jaaliyadda kasoo jeeda gobolada Jubbooyinka ee Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Sare (Gedo) – Jubbaland Diaspora Forum (JDF), ayaa waxaan hambalyo u dirayaa Ra’isal wasaaraha cusub ee Soomaaliya Dr. Cabdi Farax-graad Shirdoon (Saacid). Waxaan leeyahay “Ra’isal wasaare, aniga oo huba in xilka aad qaaday uu yahay mid uu kasoo bixi karo oo...
Guddiga fulinta ee jaaliyadda kasoo jeeda Gobolada G/gaduud, Gedo iyo Jubbooyinka oo hambalyo u diray Ra’isal wasaaraha cusub ee Soomaaliya
London, England (AOL) – Anaka oo ku hadlayna magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobolada G/gadud, Gedo iyo Jubbooyinka, waxan hambalyo iyo bogaadin u direynaa Ra’isal wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cabdi Farax-graad Shirdoon (Saacid), waxana ugu hambalyeyneynaa xilka loo magacaabay oo ah xil aad u adag uuna ka bixi karo nin karti leh oo kaliya. Waxan leenahay...
Halkaan ka daawo wareysi ay Keydmedia la yeelatay marwada Ra’isal wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xildhibaanad Caasha Xaaji Cilmi.
Video-ga hoose ka daawo wareysi ay shabakadda Keydmedia la yeelatay marwad Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Xildhibaanad Caasha Xaaji Cilmi. Keydmedia waxay marwo Caasha wareysigaan ka qaaday sanadii 2008. Read More →
Taariikh nololeedka ra’iisal wasaaraha cusub ee Somalia
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sh. Maxamuud ayaa xulasho muddo dheer qaadatay kaddib, waxuu maata Ra’isal wasaaraha ay Soomaaliya 4-ta sano ee soo socota yeelan dooto uu u doortay Saacdi Faarax Garaad oo intii muddo ahba deganaa ganacsina ku lahaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Taariikh noolaleedka Ra’isal wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo kooban: -> ...
By Abdi Sheikh Saturday, October 06, 2012 MOGADISHU (Reuters) – Somali President Hassan Sheikh Mohamud has named Abdi Farah Shirdon Saaid as the country’s new prime minister, diplomats and a government source said, the first major decision by an administration installed after over 20 years of conflict. Saaid, a political newcomer, has been a prominent businessman in neighboring Kenya and...
Garbahaarey oo uu mar kale maanta dagaal ka dhacay
Magaalada Garbahaarey waxaa mar kale ku dagaalamay ciidanka dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Ahlu suna Wal-jameeca iyo Al-shabaab, ayada oo meesha uu dagaalka ka dhacayna uu yahay duleedka Koofur bari ee magaalada Garbahaarey. Dagaalkaan ayaa yimid kaddib markii ay mar kale Maleeshiyada Al-shabaab weerar kusoo qaadeen saldhigyo ay ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu suna ku leeyihiin duleedka Garbahaarey,...